/ब्लग/ग्यालरी/Trenbolone Enanthate पाउडर 2019 मिश्रण गर्न Trenbololone Recipe कसरी प्रयोग गर्ने
प्रकाशित 05 / 21 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
Trenbolone Enanthate के हो?
Trenbolone E (Trenbolone Enanthate) स्टेरियोड्स मध्ये एक हो जुन शक्तिशाली पूरक को रूप मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ जो मांसपेशिहरु लाई मा जोड दि्छ। यद्यपि यसलाई सुरुमा प्रयोग गरिएको थियो मांसपेशियों को विकास जनावरहरूमा, बडिबिल्डरहरूको बीचमा यसको माग वर्षौंमा बढेको छ जसले यसको प्रभावकारिताको कारण मांसपेशियोंको विकासमा।
Tren E (Trenbolone Enanthate) ट्रेनबोलोनको सबैभन्दा लामो अनुमानित रूप हो र लामो समयसम्म अवशोषण दर छ। नतिजा, दर बाट यो निकासी गरिएको दर ढिलो पनि छ। यसको बाह्र दिनको आधा-अर्काको जीवन छ, जसमा यसले चोटीको समय कम गर्छ। तथापि लामो आधा जीवन, अब लामो एनाबोलिक कार्यमा योगदान गर्दछ।
कसरी ट्रेनबोलोन एननाथेट पाउडर मिश्रण गर्न ट्रेनबोलोन रिसाव प्रयोग गर्नुहोस्
सामग्री तयार गर्न आवश्यक छ
100mg / एमएल Trenbolone Enanthate Recipe 100mL को लागि
5mL अंगूर तेल
3mL र 20mL / 60ml सिरिंज एक 18-21 गेज सुई संग
Trenbolone Enanthate कदम by stepbb कदम
- स्टप 1: स्टेरॉइड वजन टर्नबोलोन एनाथेट पाउडर
-कर्म 2: बीकरमा ट्रेनबोलोन पाउडर, बीए, र बीबी थप्नुहोस्
-अस्ता 3: एक पानी नुहाउने मा बियर को गरम गर्नुहोस्
- स्टार्ट 4: अंगूर तेल जोड्नुहोस्
- स्टेट 5: फिल्टरिंग
- स्टार्ट 6: फ्लिप बन्द क्यापहरूको साथ तिनीहरूलाई दमन गर्नुहोस्
चरण 1: स्टेरॉइड वजन trenbolone enanthate पाउडर
Trenbolone enantahte तेल बनाउन ट्रेनबोलोन एनाथेट नुस्खा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंले लिनु भएको पहिलो चरण भनेको वजन Trenbolone Enanthate पाउडर एक गिलास बियरमा। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले वजन बढाउने वा तन एननाटेट भन्दा टाढा राख्न प्रक्रियाको अवधिमा पिनपोष्ट शुद्धता प्राप्त गर्नुहोला।
चरण 2: थप trenbolone बियरमा पाउडर, बीए, र बीबी
र बेंजिल बान्जोज (BB) र बेंजिल रक्सी (बीए) थप्नुहोस् र हलचल गर्नुहोस्। कच्चा ट्रेनबोलोन पाउडरमा भंग गर्न सुरु हुन्छ। यदि तपाइँ प्रक्रियाको गतिशीलता बढाउन चाहनुहुन्छ भने, चरण3जाँच गर्नुहोस्।
चरण 3: पानीको नुहाउने भाँडामा हिँड्नुहोस्
पानीको पानीमा बीकर तापेर प्रक्रियाको गति बढाउँछ। पानी धेरै नराम्रो हुनु हुँदैन, यसलाई न्यानो पार्नुहोस् किनकी धेरै उच्च तापमान ओक्साइडेशन हुन सक्छ।
मर्मतमा अँध्यारो अँध्यारो तेल जोड्नुहोस् र यसलाई राम्ररी मिश्रण गर्नुहोस्। निस्पंदन प्रक्रियामा जान अघि कुनै हार्मोन घुमाउँदैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि बेकरको तलले मात्र स्पष्ट Trenbolone Enanthate समाधान देखाउँछ।
समाधानलाई ठूलो सिरिंजमा वा सानो एकमा राख्नुहोस् (यो एक पटक धेरै पल्ट दोहोर्याइनेछ)। फिल्टर जोड्नुहोस् र सिरिन्जको सुई र स्टेरिल सिरियलमा इंजेक्शन गर्नुहोस्।
यसमा केही दबाव लागू गरेर सिरियलमा सिरिगे फिल्टरको माध्यमबाट समाधानलाई धक्का दिनुहोस्। धेरै दबाव प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने यो सिरिमिटर फिल्टर विभाजित गर्न सक्छ र तपाईं ग्यासमा समाप्त हुन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ ध्यान दिनुहुन्छ कि निस्पंदन प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, तपाईले 40ml फिल्टर गरीरहेको बेला सुरिने फिल्टरहरू स्विच गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पटक तपाईंले निलम्बन प्रक्रियाको साथ गरेपछि समाधान समाधान गर्नुहोस्।
सारांशको रूपमा, ट्रेनबोलोन ई होमबrew प्रक्रिया माथि उल्लेख गरिएको छ, तपाईले पहिलो कदम उठाउनुभएको छ एक गिलास बिक्रेतामा ट्रेनबोलोन एनाथेट पाउडरको वजन र बेन्जिल बेन्जोजेट र ब्यान्जेल अल्कोहल थप्नुहोस् (तपाई केहि टर्नबोलोन एनाथेट पाउडर अनलाइनबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता)। कच्चा ट्रेनबोलोन पाउडरमा भंग गर्न सुरु हुन्छ, तर यदि तपाइँ प्रक्रियालाई गति दिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ पानीको स्नानमा बियरलाई गर्मी गर्न सक्नुहुनेछ। पानी नराम्रो हुँदैन तर केवल न्यानो हुनु पर्छ किनभने धेरै उच्च तापमान ओक्साइडेशन हुन सक्छ।
मर्मतमा अँध्यारो अँध्यारो तेल जोड्नुहोस् र यसलाई राम्ररी मिश्रण गर्नुहोस्। निस्पंदन प्रक्रियामा जान अघि कुनै हार्मोन घुमाउँदैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। समाधानलाई ठूलो सिरिंजमा वा सानो एकमा राख्नुहोस् (यो एक पटक धेरै पल्ट दोहोर्याइनेछ)। फिल्टर जोड्नुहोस् र सिरिन्जको सुई र स्टेरिल सिरियलमा इंजेक्शन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ कि निस्पंदन प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, तपाईले 40ml लाई फिल्टर गरिसकेपछि सिरी फिल्टरहरू स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईंले पूरा गरेपछि समाधान।
यहाँ Trenbolone Enanthate फायदाहरूको एक जोडी हो जसले यसलाई प्रयोग गर्न निर्णय गरेपछि मेजमा ल्याउँछ।
- यो छिट्टै मांसपेशी विकास प्रदान गर्दछ
-उत्पादनको लागि शुभकामना
- नाइट्रोजन अवधारण रोक्नुहोस्
शरीरमा कोर्टिसोल स्तरको विनियमित गर्नुहोस्।
- भित्र बोसो हानि
यसले छिटो मांसपेशी विकास प्रदान गर्दछ
Trenbolone Enanthate प्रयोग गर्ने एक उत्कृष्ट तरिका हो यदि तपाईंलाई छिटो मांसपेशियों को विकास को प्राप्त गर्न को लागि पुरानो हो भने तपाईंको पूर्ण क्षमता को एहसास मदद।
काटनका लागि राम्रो
Trenbolone Enanthate कुनै पनि संदेह संग एक काटने चरण मा दुबला मांसपेशी जन को बनाए राखन को समयमा तपाईं कटौती मा धेरै उपयोगी छ।
नाइट्रोजन अवधारण बढाउनुहोस्
केहि स्टेरियोड्सहरूको विपरीत जसको मांसपेशिहरु ठूलो मात्रामा पानी अवधारणको परिणाम हो, टर्नबोलोन एन्यान्टिएट वजन घटाने नाइट्रोजन वृद्धिको परिणामको रूपमा हो, जुन स्थायी मांसपेशिहरु विकास हुन्छ।
Trenbolone Enanthate व्यासिसोल उत्पादनको मात्राले पुन: प्राप्ति बढाएको र उपचारको बेला उनीहरूको सहनशीलतामा थपिन्छन्।
फ्याट हानिमा सहयोग
प्रशिक्षणको समयमा, धेरै एथलीटले यसलाई स्टार्च खरिद गर्नाले सट्टाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न मन पर्छ जसले वजन बढाउँछ।
सबैभन्दा बलियो सूचीमा हुनु स्टेरियोड्स, Trenbolone Enanthate पहिले देखि नै तपाइँको मन पर्ने स्टेरियोड्स मध्ये एक हुनुपर्दछ। यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्दै योजना बनाउनुहुन्छ, यसले तपाईंलाई चिन्ता नगर्ने। तपाईं या त यसलाई गृहबाउको निर्णय गर्न वा Trenbolone Enanthate अनलाइन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
Anabolic स्टेरॉयड र तिनीहरूलाई बनाउन, प्रोफेसर फ्रैंक, पृष्ठ 1-47
भूमिगत एनालोलिटिक्स, विलियम ल्लेवलिन, रोनी टॉबर
Anabolics, विलियम Llewellyn
2019 कसरी6चरणहरूमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट होमब्रिज बनाउने DECA पाउडर - परम गाइड कसरी गर्ने Nandrolone Decanoate (Durabolin)